Hyuka - Xiliga 2 Suurtagal ma yahay? - Muuqaalka Cradle
Chitanda iyo Oreki oo wada jira
by Lilly Garcia 7th November 2020 27th Janaayo 2021
Leave a Comment on Hyuka - Xiliga 2 Suurtagal ma yahay?
Waxaa laga soo qaatay "Hyouka" [Xilliga 1, Qaybta 22] - Kyoto Animation
Hyouka waxay xarumo ku leedahay agagaarka koox arday ah oo dugsi sare ah oo samaysa naadi loo yaqaan "The Classic Lit Club". Inta lagu jiro wakhtiga ay ku jiraan naadigan waxay galaan tacabur xalinta "waxyaabo qarsoon" iyo caawinta dadka kale ee leh dhibaatooyinka la midka ah. Qaybtii 22aad ee Slice Of Life anime oo ka kooban 4 jilayaal oo waaweyn iyo tiro badan oo jilayaal ah ayaa markii hore la sii daayey Abriil 22, 2012 ilaa Sebtembar 16, 2012, iyada oo qaybtii hore ee asalka ahayd la soo bandhigay Abriil 14, 2012 xaflad gaar ah oo ka dhacday Shineemo Kadowaka, Shinjuku , Tokyo. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxay arkeen wax aan la soo koobi karin balse si wanaagsan loo dhameeyay iyadoo Chitanda iyo Oreki ay ka wada hadlayaan khilaafaadkooda iyo hamiga mustaqbalka.
Marka hore waxaan u baahanahay inaan ka hadalno dhamaadka Hyouka iyo habka ay u qaabaysan tahay, ka hor inta aanaan gelin suurtogalnimada xilli 2. Dhamaadka Hyouka ma ahayn mid aad u dhammaystiran sida sheekooyinka guud ee soo afjaraya iyo diridda. Si kastaba ha ahaatee, waxay naga tagtay qoraal aad u faraxsan oo feker leh. Waxay ku dhammaatay Oreki iyo Chitanda inay wada sheekeysi wacan ka yeesheen mustaqbalkooda iyo halka ay hadda aadi doonaan. Waxay ahayd mid aad u xiiso badan in la arko horumarkan firfircooni wuxuu ahaa dhinac labada jilaa. Weligay hore uma markhaati.
Waxa kale oo jirtay qayb yar oo ka mid ah muuqaalkan dhamaadka ah oo ii qaabeeyey mid aad muhiim u ah. Waa meesha Oreki ay ku weydiinayso Chitanda shaqada ay sii wadi doonto. Oreki waxa uu waydiiyay waxa uu Chitanda u malaynayo haddii uu doonayo in uu qabto shaqo caynkaas ah. Dareen-celinta Chitanda waa sidii la filayey, way yaabtay, ilaa laga ogaaday inuusan waligiis waydiin oo kaliya wuxuu helay ilaa qaybta koowaad ee jumlada. Tani waa sababta oo ah Chitanda ayaa weydiistay inuu dhammeeyo jumlada, kaas oo uu ku yiraahdo "Oh waxba". Tani waxay si maldahan u noqon kartaa mustaqbalkooda si wadajir ah iyo haddii ay dib isu arki doonaan.
Dhammaadkii run ahaantii wax badan kama sheegin xilliga 2. Waxaa jirta sabab tan, oo aan dib u iman doono. Muuqaalkani wuxuu inta badan muujiyay dareenka Chitanda iyo Oreki labadaba, iyo sidoo kale muujinta cashar ku saabsan qaan-gaarnimada iyo caruurnimada. Oreki waxa uu rabay in uu u sheego Chitanda sida uu dhab ahaantii u dareemay iyada oo uu fahmay ka labalabaynta Satoshi intii lagu jiray qaybti hore ee ku saabsan Ibara. Labaduba waxay isweydaarsadeen erayo kale ka hor intaanay kor eegin oo aanay daawan dabayshu geedaha dhex mareysa. Waa hab aad u fiican oo lagu dhammeeyo taxanaha, gaar ahaan mid sida Hyuka oo kale ah mana filayo in wax kale halkan lagu sameeyo. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko wax badan oo u dhexeeya Chitanda iyo Oreki laakiin taasi waa ilaa inta aan ka helnay anime.
Fahamka la qabsiga Hyuka
Si loo soo gabagabeeyo in uu jiro xilli 2 iyo in kale waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno la qabsiga anime ee Hyuka iyo nuxurka ay dhab ahaantii laga soo xigtay. "Hyouka" waxaa la qoray 2001 by Honobu Yonezawa. Taxanuhu wuxuu ku wareegsan yahay wax kasta oo aan ku aragno anime-ka iyo waxa aan fahamsanahay anime-ka waxaa loo habeeyey ku dhawaad ​​​​dhammaan, iyada oo ay adag tahay in wax laga tago ama ka sii daro, khalad dhaco. Dhankaas, anime-gu wuxuu qabtay shaqadiisa, mana jirin wax qalad ah oo ku saabsan. Si kastaba ha noqotee, laqabsiga anime-ku wuxuu daboolayaa kaliya sheeko-dhaleedka iftiinka, oo uu qoray Yonezawa mana sii ballaarinayo, maaha inuu awoodo. Taxanaha novel-ka iftiinka ee loo yaqaan Hyouka waa la soo gabagabeeyay mana jiraan wax kale oo la qori karo ilaa hadda. Si kale haddii loo dhigo, riwaayadda ama mugga aan sheego, waa la soo gabagabeeyey.
Ma jiri doona xilli 2?
Way adag tahay in la yiraahdo, laakiin ilaa tiro badan oo sheeko asalka ah la qoro, uma badna in Hyouka uu ku soo laaban doono xilli 2. Tani waxay inta badan sabab u tahay xaqiiqda ah in sheekada la soo gabagabeeyay iyo in Hyouka (laqabsiga anime) uusan sii socon karin ilaa taasi dhacdo. Tani waxay ahaan lahayd kiis haddii qoraagii asalka ahaa uu dhintay ama uu awoodi waayo inuu sii wado qorista, laakiin xaaladdu sidaas maaha. Honobu Yonezawa, oo dhashay 1978 kii ilaa maanta wuu sii wadaa shaqadiisa. Miyay sidaa u dheertahay in la waydiiyo haddii uu sii wadi doono sheekada? Dhab ahaantii waa suurtagal laakiin ma dhici karto.
Waxa aan filan karno in aan aragno waxay noqon kartaa sii socoshada halkii aan ka tagnay markii ugu dambeysay. Waxaan u maleynayaa in inta badan tani ay ku soo degi doonto sheeko labaad oo buuxa oo Hyuka ah, oo ka bilaabaneysa meeshii aan ka tagnay. Qaab kale oo tan loo kaydin karo waxay noqon kartaa in la dhigo sheeko cusub 3-5 sano ka dib dhacdooyinka dhamaadka anime-ka. Halka aanu ku aragno Oreki iyo Chitanda oo is macsalaamaynaya. Waxaan u maleeyay in tani ay noqon doonto habka ugu habboon ee lagu sii wadi karo laqabsiga anime ee Hyouka maadaama ay macno badan samaynayso in la helo sheeko labaad oo dhacda 3-7 sano ka dib dhacdooyinka asalka ah. Waxaan u maleynayaa in sababta tani ay tahay in sheekada Hyouka iyo afartayada jilaa ee ugu muhiimsan ay bilaabeen inay soo afjaraan, maadaama ay ku dhow yihiin dhammaadka wakhtigoodii dugsiga. Haysashada anime-ka laga soo qaado meeshan waxay la macno tahay inaan aragno sida Chitanda, Oreki, Ibara iyo Satoshi noloshoodu u horumartay. Waxay noqon doontaa fikrad xiiso leh in la sahamiyo waxaanan u maleynayaa inay jiraan wax badan oo suurtagal ah tan.
Aad bay u adag tahay in la yiraahdo marka la eego duruufaha, anime-ka ayaa joojiyay wax soo saarka 2012 ka dib markii wax walba (maaddada manga) la waafajiyay. Markaa 8 sano ayaa laga joogaa markii laqabsiga anime-ka laga shaqeeyay. Si kastaba ha noqotee, 2017 filim ficil toos ah oo muujinaya dhacdooyinka ugu muhiimsan ee Hyuka ayaa la sii daayay. Muhiimada tani waa in ay u muuqato mid istuudiyaha u maleeyay in ay mudan tahay in tan la sameeyo, inkastoo filimka ficilka tooska ah la qoray ku dhawaad ​​​​16 sano ka dib markii la qoray sheeko asalka ah. Haddaba maxay tani ka dhigan tahay? Xiliga 2 ee laqabsiga anime ma suurtagalbaa hadii filimada ficilka tooska ah wali laga samaynayo Hyuka? Tani waxay ahayd kaliya 3 sano ka hor, iyadoo OVA-yada kale iyo kuwa kale la qoray lana soo saaray. Hyouka waxay u muuqataa anime aad loo jecel yahay markaa hubaal ma noqon doonto waqti dheer ka hor xilli 2.
Goorma ayuu Season 2 hawada soo galayaa?
Waxaa laga soo qaatay "Hyouka" [Qaybta 14]
Waxaan lahaa in aan sheego wax kasta oo aan ka hadlay meel kasta oo u dhexeeya 2022 iyo 2024. My sababta ugu weyn ee this waa in Hyuka ayaa soo bandhigay 22 Episodes inta lagu guda jiro siidayntiisa bilowga ah ay la socdaan qaar ka mid ah OVA sidoo kale. Haddii aan filan karno kan xilli ciyaareedka cusub markaas waqtigani wuxuu u muuqdaa mid sax ah. Markii waraysiga la waydiiyay Yonezawa ayaa sheegay in xiisihiisa xilli 2 ee Hyuka uu ahaa mid aad u yar.
Sidoo kale tan waxaan dareemayaa inaan u baahanahay inaan xuso weerarkii foosha xumaa ee ka dhacay 2019 ee Kyoto animation studio 1 dhismaha (istuudiyihii mas'uulka ka ahaa laqabsiga anime ee Hyouka) kaasoo dilay 36 qof laguna dhaawacay 33 kale. Haddii aad rabto inaad wax ka akhrido weerarka waad awoodaa halkan. Qalbigeygu wuxuu la socdaa cid kasta oo ay saameysay falkan argagixisanimo iyo rabshadaha. Iyadoo ay jiraan waxaas oo dhan, warka wanaagsan ayaa ah in sanadkan laga bilaabo istuudiyaha uu si buuxda uga soo kabtay weerarka oo uu qaadayo tillaabooyin dib u dhis ah. Istuudiyaha kale ayaa sidoo kale sheegay inay xiisayn doonaan sii wadida mustaqbalka labaad ee Hyouka.
Marka inta badan, suurtogalnimada xilliga 2 waxay ku xiran tahay saddexdan arrimood:
If Yonezawa wuxuu diyaar u yahay inuu sii wado sheekada Hyuka ama u ogolaado qorayaasha/soosaarayaasha kale inay sii wadaan.
Kyoto animation awood u leh inuu sii wado wax soo saarka ka dib soo kabashada ama istuudiyaha kale ee qaadanaya doorka
Baahida iyo xiisaha xilli 2 (imisa qof ayaa raba inay arkaan xilli 2 ee Hyuka) iyo haddii ay faa'iido yeelan doonto.
Iyo haddii xilli 2 ee Hyuka uu u qalmo maalgeliyayaasha iyo shirkadda wax soo saarka ee mas'uulka ka ah.
Ilaa hadda in kastoo taasi ay tahay waxa aan runtii dhihi karno. Hadii aad maqaalkan faaiido u heshay fadlan sii like oo hubi inaad share garayso Waxaad ka eegi kartaa maqaalladayada kale halkan:
Waxaad fiirin kartaa qoraaladeena ugu dambeeyay halkan - https://cradleview.net/most-recent-posts
Waxaad ka akhrisan kartaa taxanaheena Top 10 halkan - https://cradleview.net/top-5/
Waxaad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada halkan - https://cradleview.net/reviews/
Iskuxir boggayaga maqaalka halkaas oo dhammaan qoraaladayada lagu dhajiyo - https://cradleview.net/all-posts/
Waad gaari kartaa inaad adeegsato boggayaga bulshada - https://cradleview.net/all-posts/
Waad ku deeqi kartaa bartayada halkan - https://cradleview.net/donations/
Waxaad ku bilaabi kartaa foomka xiriirka halkan - https://cradleview.net/info/
Dukaankeena guud - https://cradleview.net/store/
Tags: animehyouka animehyoukaseason1 animehyoukaseason2 animehyoukaseason2episode1 animehyoukaseason2 siideyn hyouka hyoukaanieseason2 maqaal hyoukaanimefinalepisode hyoukaanimegetseason2 hyoukaanimegetseason2? hyoukanime hyoukaseason2 hyoukaseason2 maqaal hyoukaseason2episode1 season2ofhyouka maxaad ukaanimgetseason2? willhyoukanimegetaseason2 willtherbeaseaseason2ofhyyouka
Gelitaan Hore 10-ka Isbaanish ee Loogu Magac Daray Anime Si Aad Uga Daawato Netflix [Oo Aad Gasho Clips]
Gelitaanka Xiga GANGSTA. - Waa maxay sababta xilli 2aad ay macquul tahay